FAALO:- Wasiirka Maaliyadda: shaqsi mudan in lagu daydo. – Radio Daljir
Abriil 7, 2018 12:08 g 2
Waa qasab in dowlad kasta ay ku shaqeyso nidaam iyo barnaamij Maaliyadeed oo aasaas u ah dhaqaalaha ka soo xerooda bulshada iyo lacagaha kale ee laga helo hirgalinta mashaariicda horumarineed oo ay la wadaagaan dalalka daneeya ama saaxiibka dhow la ah dowladahaasi.
Dowladnimada Soomaaliyeed ee xilligaan ,waa mid ku dhalatay rabitaanka bulshada,kuna guuleystay in ay diyaariyaan isla markaana soo bandhigaan barnaamij maaliyadeed oo keeni kara in dadku ay la socdaan dhaqalaha dowladda ee dhinaca gudaha iyo dibadda ,si ay meesha uga baxdo tuhunada la xiriira wax isdaba-marin iyo lunsasho habti umadeed.
Hannaanka Maaliyadda ee la qorsheeyay waqtigaan ayaa suurtogeliyay in ay soo baxaan koror dhaqaale,gaar ahaan bilihii u dambeeyay sanadkaan ee Marso iyo April,waxaana arimahaasi keenay hagaajinta nidaamka loo qaado dakhliga.
Maamulka Wasaaradda Maaliyadda oo uu hor-boodayo Wasiir Beyle ayaa u muuqda kuwo ka dhabeeyay dadaalkii iyo waxqabadkii ahaa in lala yimaado howlkarnimo iyo isla xisaabtan dhab ah oo xilligaan horseeda kalsooni ay bulshadu ku qabto xukuumadda J.F.Soomaaliya.
Howlaha baaxadda leh ee ay wadaan Wasaaradda Maaliyadda,gaar ahaan dhinaca kororka dhaqaalaha ayaa loo arkaa mid suuragalinaya in dalku uu ka taxadiro qaadashada lacago deyn ah ,waxaaana la rajeynayaa in la bilaabo ururinta canshuuro badan oo weli baaqi ku ah gacanta dadweynaha.
Si loo helo koboc dhaqaale oo inta hadda la hayo ka badan waa in hey’adaha dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed oo wadajir ah ay u istaagaan sidii Wasaaradda Maaliyadda gacan looga siin lahaa gudashada howlaha baaxadda leh ee ku aadan hagaajinta iyo ururinta lacagaha canshuuraha ee dalka.
Waxaa dhab ah in xukuumadda Soomaaliya ay xil iska saartay sidii loo heli lahaa dakhli sax ah oo salka ku haya caafimaad-qabka ururinta canshuuraha dalka, sidaa daraadeed dowladda Soomaaliya waxa ay heysataa fursad qaali ah oo aan soo marin kuwii ka horeeyay
Hadii dakhliga gudaha loo ururiyo si nidaam ah,isla markaana loo maamulo si daacad ah oo ay ku dheehan taahay alla ka cabsi waxaa aamin sanahay in la qaadan karo shaqqaalaha dhimman ee dulsaarka ku ah wasaaradaha,isla markaana mudada sanad iyo barka ah sugaya gacanta dowladda.
Ugu dambeyntii dalku waxa uu u baahan yahay shaqsiyaad daacad ah oo ka shaqeeya danta umadda ,sida Wasiirka Maaliyadda ,balse uma baahna mid ka shaqeysta ama ku takrifala hantida umadda.
Hormuud baad utahy somlida manta
Allha ku sharfo wasiir bayle